You are here: Home somal Tartanka Kooxaha Heerka Koowaad Ee Caasimada Oo Maanta Si Rasmiya Uga Furi Doona Garoonka Hargeysa Stadium.
Hargeysa(Somal Sports) Waxa garoonka Weyn ee caasimada Magaalada Hargeysa maanta ka furmaya tartanka kooxaha heerka koowaad ee ka dhisan caasimada Hargeysa.
Tartankan oo ay ka qayb galayaan sideed kooxood oo heerka koowaad ah ayaa waxa dhigtay wasaarada dhalinyarada dhaqanka iyo ciyaaraha Somaliland.
Sida uu gudoomiyaha garsoorayaasha Somaliland Khadar Jiilaal Jaamac ayaa sheegay in koobkan loogu tala galay inay ku tartamaan kooxaha heerka koowaad ee ka dhisan
Caasimada hargeisa isla markaana lagu dhiri geliyo dhalinyarada ciyaaraha kubada cagta Somaliland.
Furitaanka koobka kooxaha heerka koowaad ee caasimada Hargeisa ee manta furmaya ayaa ciyaarta ugu horaysa waxa galabta fooda isku dari doona kooxaha Ciidanka Asluubta iyo Kooxda ku ciyaarta magaca Ganacsiga Somaliland.
Koobka kooxaha heerka koowaad ee ka dhisan caasimada Hargeisa ayaan la qaban sanadadii ugu danbeeyey taas oo noqonaysa markii ugu horaysay ee ay wasaarada dhalinyarada dhaqanka iyo ciyaaruhu ay sanadkan qabato tartanka kooxaha heerka koowaad ee ka dhisan caasimada Hargeisa.